Kismaayo News » Hiiraan oo looga diyaar garoobayo Jiilaalka
Hiiraan oo looga diyaar garoobayo Jiilaalka
Kn: Gobolka Hiiraan deegaamada wabiga Shabeelle jiinkiisa ku teedsan ayaa looga diyaargaroobayaa xiliga Jiilaalka oo wabigu bilaabay inuu biyo yareeyo ama guraba sanadihii u danbeeyay.
Beeraladay qaar ayaa bilaabay inay qodaan kaliyo masaafe soconayo oo biyaha lagu kaydiyo si marka wabigu ingago ay u isticmaalaan kaydka biyaha ay hadeer sii xiranayaan.
Degmooyinka Qoryoolay iyo Afgooye ayaa durba laga soo sheegayaa inuu wabigu ku sii dhawyahay heer uu qalalo, mana jiro wax talaabo ah oo biyo la’aanta soo foodleh looga hortagayo ay qaadeen dawladda dhexe ama maamul gobolleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo wadaaga wabiga Shabeelle.
Ayadoo sadexdii bilood ee xiliga Jiilaalka aan bishii ugu horaysay ku gudo jirno ayaa waxaa muuqda ifafaalo ay markale abaar daba dheeraata ay ku dhufato Soomaaliya, mana muuqato saansaan ay bulshadu uga gaashaamatay biyo la’aanta inagu soo fool leh. Nasiib darradu waa in marka roobku da’ana ay dadka iyo duunyadu u dhamaadaan daadad iyo shuban biyood, marka uu Jiilaalku yimaadana ay u dhamaadaan biyo la’aan.
Hadii barwaaqada biyaha la kaydsado waxaa looga bixi lahaa abaaraha, waxaase nasiib wanaag ah in shacabka ku dhaqan gobolka Hiiraan ay noqdaan dadka ugu hor baraaruga ee ka faa’iidaysta, weelaystana inta biyuhu durdurayaan.